Freddy Krueger ga - abụ "Ihe nro" na Nwụrụ anwụ site n'ehihie | Gam akporosis
Freddy Krueger si 'A Nightmare na Elm Street' na-abịa Nwụrụ Anwụ site n'ehihie n'oge adịghị anya
Otu n'ime ihe odide kachasị atụ egwu site na Nightmare na Elm Street saga, ihe nkiri ndị ahụ sitere na 80s na 90s, ga-abịa Oge Nwụrụ Anwụ site na Daylight, egwuregwu egwuregwu ọtụtụ egwuregwu n'ịntanetị nke otu n'ime ndị egwuregwu na-arụ ọrụ nke onye ọjọọ ahụ.
Dị otú ahụ a agwa ọjọọ nke nwere ike bụrụ ihe ngọcha kachasị mma maka ịme ka ị mata onwe gị na egwuregwu egwuregwu a n'ịntanetị nke anyị ji kpọrọ ihe n'afọ gara aga dị ka egwuregwu nke ọnwa Androidsis.
Nwụrụ anwụ site n'ehihie bụ a online ọtụtụ egwuregwu nke ndị egwuregwu anọ ga-agbanahụ agbanyeghị site na njide nke ụfọdụ ndị ọjọọ akụkọ kachasị na akụkọ ihe mere eme nke sinima. Egwuregwu nke nwere oke ikuku na izu ike nke na-ewe ihe nkiri kacha mma na fim ndị ahụ nwere ike ịme ka anyị rapara na sofa.
Maka ndị na-ahụtụbeghị ụdị nke Nightmare na fim Elm Street, Freddy Krueger Ọ bụ ajọ onye ogbu mmadụ nke pụtara na nrọ nke otu ndị na-eto eto. Eziokwu ahụ bụ na ha enweghị ike ihi ụra, n'ihi na Freddy na-eche igbu ha, nwere ike iduga anyị n'ọtụtụ nrọ na oge nke esemokwu.
Ọzọkwa uwe ya na ajị anụ ahụ na ọkụ na-emekpa ọkụ na nke yiri ka ọ gbazee, yana okpu ya dị iche na nke na-acha uhie uhie na nke ojii na-acha uhie uhie, nyere ya aka ikpeazụ iji bụrụ otu n'ime ndị ọjọọ ama ama na ihe nkiri egwu.
A ga-akpọ Freddy Krueger dị ka Nightmare na Nwụrụ Anwụ site na Daylight na ekwentị, na onye na-eme ihe n’azụ ya ga-abụ Quentin Smith, onye na-egwuri egwu na 2010 reboot nke A Nightmare na Elm Street.
A ga-enwe ihe omume a na-akpọ "Ọbara Ọbara" na nke Freddy Krueger pụtara na Dead by Day. Ugbu a ichere maka ụbọchị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Freddy Krueger si 'A Nightmare na Elm Street' na-abịa Nwụrụ Anwụ site n'ehihie n'oge adịghị anya